DHEGEYSO-Madaxweynaha Soomaaliya oo Alshabaab ugu baaqay inay dowladda isudhiibaan. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Madaxweynaha Soomaaliya oo Alshabaab ugu baaqay inay dowladda isudhiibaan.
Luulyo 5, 2016 1:15 b 0
(July 05 2016)-Madaxweyna Jamhuuriyadda federaliga ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ugu baaqay dhammaan xubnaha katirsan Alshabaab madax iyo maleeyshiyaadba inay isa soodhiibaan maalmaha ciida si ay dowladdu cafis ugu fidiso.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ugu baaqay Shabaab in ay joojiyaan dagaalada iyo qaraxyada ay ka wadan Soomaaliya ,islamarkaana dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay Soo dhaweyso hogaamiyaasha ka tirsan ee isku soo dhiiba dowladda Soomaaliya.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Subaxnimo ee Saaka iyo Dunida Xarunta Garoowe 05 July.
Dhagayso Wariyaasha kale ah Cabdiqani Sh. Cabdullaahi Irbad iyo Axmed Cali Kilwe oo ku baaqay saraynta sharciga